Tarkaanfilee dhaabbileen miidiyaa hawaasaa facaatii odeeffannoowwan sobaafi haasaa jibbiinsaa ittisuuf fudhachuu qaban! – ኢትዮጵያ ቼክ
Tarkaanfilee dhaabbileen miidiyaa hawaasaa facaatii odeeffannoowwan sobaafi haasaa jibbiinsaa ittisuuf fudhachuu qaban!
Miidiyaaleen hawaasummaa Itoophiyaa keessattis ta’e guutuu addunyaatti madda odeeffannoo ijoo erga ta’anii bubbulaniiru.
Biyyaalee guddataa jiran kan akka Itoophiyaa keessatti lammiileen gaazexaa bitanii dubbisuurra oduuwwan haaraa gama bilbila isaaniitiin ilaaluun itti salphata.
Televizhiinii yookin raadiyoo caqasuurras itti fayyadamni miidiyaalee hawaasummaa akka Feesbuukiifi Telegiraama daran dabalaa jira.
Guddinni saffisaan gama itti fayyadama miidiyaalee hawaasummaatiin mul’atu kunis dhaabbileen miidiyaa oduuwwan isaanii gama miidiyaalee hawaasummaatiin akka dhiyeeffatanfi namootnis yaadafi odeeffannoowwan akka waliin qooddatan taasiseera.
Facaatiin odeeffannoo gama miidiyaalee hawaasummaatiin taasifamu guddachuunsaa mataa isaatiin rakkoo ta’uu baatus qaamoleen tokko tokko carraa kanatti fayyadamuun odeeffannoowwan sobaafi haasaa jibbiinsaa salphumatti akka tamsaasan haala mijataa uumera.
Kun immoo rakkooleen uummaman akka hammaataniif gumaacha olaanaa taasiseera.
Namootni hedduunis “dhaabbileen miidiyaalee hawaasummaa gama kanaan maal hojjechaa jiru?” jechuun yeroo gaaftan mul’ata.
Dhaabbileen miidiyaa hawaasummaa waggaa waggaan bu’aa doolaara biliyoonaan lakkaa’amu buufatan kan akka Feesbuukii, tajaajilli isaanii fayyadamtoota maraaf mijataafi miidhaa kan hin qaqqabsiisne akka ta’u gochuu akka hin dandeenye gabaasawwan heddu himu.
Dhaabbileen miidiyaa hawaasummaa haasaawwan hammeenya qaban, barreeffamoota walitti bu’iinsa kakkaasan akkasumas gochaalee jibbiinsa lallaban hordofuun tarkaanfii fudhachuu akka qaban ifadha.
Kunis labsii haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa ittisuufi to’achuuf bahe keessatti ifatti kaa’ameera.
Kanaaf dhaabbileen miidiyaa hawaasummaa akka Feesbuukii, Tiwiitarafi kunneen biroo namoota dhimma facaatii odeeffannoowwan sobaafi haasaawwan jibbiinsaa Itoophiyaa keessa jiru irratti hubannoo qaban bobbaasuun tarkaanfii fudhachuu qabu.
Kana gochuu dhiisuun itti gaafatamummaa bahachuu dhabuu qofa osoo hintaanee dhimma itti gaafatama seeraa fiduu danda’udha.